၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ ယေန႔မွာ YBS 23 ေပၚမွာ ေငြသားအေျမာက္အမ်ားပါသည့္ ပိုက္ဆံအိတ္ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ျပန္လာယူရန္ အသိေပးထား ( Passport ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ အပါအဝင္ ေငြေတြ အိတ္တလုံးအျပည့္ဆိုေတာ့....) - CeleCloud
၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ ယေန႔မွာ YBS 23 ေပၚမွာ ေငြသားအေျမာက္အမ်ားပါသည့္ ပိုက္ဆံအိတ္ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ျပန္လာယူရန္ အသိေပးထား ( Passport ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ အပါအဝင္ ေငြေတြ အိတ္တလုံးအျပည့္ဆိုေတာ့….)
Local, News, Social News
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက် ယနေ့မှာ YBS 23 ပေါ်မှာ ငွေသားအမြောက်အများပါသည့် ပိုက်ဆံအိတ်တွေ့ရှိသဖြင့် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လာယူရန် အသိပေးထား ( Passport နှင့် မှတ်ပုံတင် အပါအဝင် ငွေတွေ အိတ်တလုံးအပြည့်ဆိုတော့….)
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက် ယနေ့မှာ YBS 23 ပေါ်မှာ ငွေသားများအပြင် Passport နှင့် မှတ်ပုံတင်ပါသည့် အိတ်တစ်လုံးကိုယာဉ်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိထားသဖြင့် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လာယူရန် YBS ၂၃ ယာဉ်လိုင်းမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက
လူမှုကွန်ရက်မှတဆင့်အသိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ YBS ၂၃ မှာ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ သခင်မြပန်းခြံကို ပြေးဆွဲပေးနေသည့် ဘတ်စ်ကားယာဉ်လိုင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ငွေသားအမြောက်အများပါ အိတ်ကို YBS ၂၃ ယာဉ်လိုင်းမှယာဉ်အမှတ်- J5868
ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ငွေသားအမြောက်အများပါသည့် ပိုက်ဆံအိတ်တွေ့ရှိသဖြင့် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် YBS ၂၃ အောက်လမ်းဂိတ်ရုံးတွင်လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၂ ခုနှစျ ဇှနျလ ၁ ရကျ ယနေ့မှာ YBS 23 ပေါျမှာ ငှသေားအမွောကျအမြားပါသညျ့ ပိုကျဆံအိတျတှေ့ရှိသဖွငျ့ ပိုငျရှငျကိုယျတိုငျပွနျလာယူရနျ အသိပေးထား ( Passport နှငျ့ မှတျပုံတငျ အပါအဝငျ ငှတှေေ အိတျတလုံးအပွညျ့ဆိုတော့….)
၂၀၂၂ ခုနှစျ ဇှနျလ ၁ ရကျ ယနေ့မှာ YBS 23 ပေါျမှာ ငှသေားမြားအပွငျ Passport နှငျ့ မှတျပုံတငျပါသညျ့ အိတျတစျလုံးကိုယာဉျပေါျတှငျတှေ့ရှိထားသဖွငျ့ ပိုငျရှငျကိုယျတိုငျပွနျလာယူရနျ YBS ၂၃ ယာဉျလိုငျးမှတာဝနျရှိသူတစျဦးက
လူမှုကှနျရကျမှတဆငျ့အသိပေးထားတာဖွစျပါတယျ။ YBS ၂၃ မှာ ရနျကုနျနညျးပညာတက်ကသိုလျမှ သခငျမွပနျးခွံကို ပွေးဆှဲပေးနသေညျ့ ဘတျစျကားယာဉျလိုငျးဖွစျပွီး အဆိုပါ ငှသေားအမွောကျအမြားပါ အိတျကို YBS ၂၃ ယာဉျလိုငျးမှယာဉျအမှတျ- J5868
ဘတျစျကားပေါျတှငျတှေ့ရှိခွငျးဖွစျတယျလို့ သိရပါတယျ။ ငှသေားအမွောကျအမြားပါသညျ့ ပိုကျဆံအိတျတှေ့ရှိသဖွငျ့ ပိုငျရှငျကိုယျတိုငျ YBS ၂၃ အောကျလမျးဂိတျရုံးတှငျလာရောကျထုတျယူနိုငျကွောငျး အသိပေးထားခွငျးဖွစျပါတယျ။
ကောင်မလေးတိုင်း အားကျသွားရလောက်တဲ့ ဂစ်တာရှိုတ်လေးလို သွယ်လျကျစ်လစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှတရားတွေနဲ့ မေမြင့်မိုရ်
အကိုဖြစ်သူ၏မင်္ဂလာပွဲကိုပျော်ရွင်စွာဖြင့်သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း မင်္ဂလာပွဲရောက်မှသတိုးသမီးကသူရဲ့အတန်းပိုင်ဆရာမဖြစ်နေလို့ ထိုင်ငိုနေခဲ့သည့်၇နှစ်အရွယ်ကောင်လေး
တစ္လေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေရာင္စုံပန္းပင္လယ္ႀကီးထဲမွာ ႐ိုမက္တစ္အဆန္ဆုံးနဲ႔ ခ်စ္သူမိန္းကေလးကို လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းခဲ့ေသာ လူငယ္တစ္ဦး
ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းအဆန်းလေးနဲ့ ရင်ခုန်စရာ အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်နေပြီး ပုရိသတွေကို ကြွေစေပြန်တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်
လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းက လွန်ကဲစွာ ဟိုနှိုက်သည် နှိုက်ရှာဖွေမှုကြောင့် ငိုခဲ့ရတဲ့သတင်းထောက်
မိုးသက္ေလျပင္းေတြတိုက္ခတ္ေနသည့္ၾကားက သားသမီးေတြရဲ႕ ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ ေလွငယ္တစ္စီးနဲ႔ ပင္လယ္ထဲမွာေစ်းေရာင္းရင္း ဝင္ေငြရွာေနေသာ မိခင္တစ္ဦး
စပါးခွံကနေ လျှပ်စစ် ထုတ်နေကြတဲ့ ထိုင်းက ဆန်စက်ကြီးများနှင့် မြန်မာပြည်က လိုအပ်ချက်
YBS စီးရင် သံပရာသီး အမြဲဆောင်ထားပါ၊ မိန်းကလေးတွေ ဒီလိုတောင် ကြုံတွေ့နေရပါပြီ
စုန်း ၇ ယောက်အကြောင်း (သို့) ရွာတရွာဖြစ်ပေါ်ဖို့ စုန်း(၇)ယောက် ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာဘာလဲ
သမီးလေးမှာ အရမ်းချောမောပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာကြောင့် သူမရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကို စိတ်ပူကာ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ပြီး သက်တော်စောင့်အဖြစ် နေပေးခဲ့သောဖခင်